मानिसजाति बचे--नूह र जलप्रलयको कथा | बाइबल सन्देश
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइरिस आइसल्याण्डिक आम्हारिक आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इलोको उङ्गाबेरे उज्बेक उज्बेक (रोमन) उड्मुर्त उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओसेसियन कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबाइली किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज किश कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस सोरानी केक्ची कोंकनी (देवनागिरी) कोंकनी (रोमन) कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्षोसा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीक साङ्केतिक भाषा ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोल जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डच साङ्केतिक भाषा डिगोर डुआला डेनिश तरहुमरा (मध्य) ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्सोंगा थाई नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फुलफुल्डे (क्यामरून) फेरोई फ्रान्सेली बंगाली बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मराठी मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिजो मिस्किटो मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) लाओशियन लाट्भियन लो जर्मन वारे-वारे शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सिंहला सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सोट्सेल सोमाली स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
परमेश्वर दुष्ट संसारलाई नाश गर्नुहुन्छ तर नूह र तिनका परिवारलाई जोगाउनुहुन्छ
जसै मानिसजातिको संख्या बढ्दै गयो, पाप र दुष्टता पनि पृथ्वीमा द्रुत गतिमा फैलियो। परमेश्वरले एकदिन दुष्ट मानिसहरू नाश गर्नुहुनेछ भनेर हनोक नाउँ गरेका त्यतिबेलाका एक मात्र अगमवक्ताले चेतावनी दिए। तैपनि दुष्टता कम भएन, झन्‌ बढ्दै गयो। केही स्वर्गदूतहरूले स्वर्गमा आफ्नो स्थान त्यागेर, पृथ्वीमा मानिसको रूप धारण गरेर अनि लालचसाथ स्त्रीहरूलाई आफ्ना पत्नी बनाएर परमेश्वरको विद्रोह गरे। यस्तो अप्राकृतिक सम्बन्धले गर्दा ठिमाहा सन्तानहरू जन्मिए। नपील भनिने यी अजङका राक्षसहरूले संसारमा झनै हिंसा र रक्तपात मच्चाए। पृथ्वीमा आफ्ना सृष्टिहरूको अवस्था देखेर परमेश्वरको मन असाध्यै दुख्यो।
हनोकको मृत्युपछि त्यस दुष्ट संसारमा एक जना मानिस भने भिन्नै थिए। तिनको नाउँ नूह थियो। तिनी र तिनका परिवारले परमेश्वरको नजरमा जे सही छ त्यही गर्ने कोसिस गरे। परमेश्वरले दुष्ट मानिसहरूलाई नाश गर्ने निर्णय गर्नुभयो। तर नूह र पृथ्वीका पशुपक्षीहरूलाई उहाँ जोगाउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैकारण परमेश्वरले तिनलाई लामो र ठूलो बाकसजस्तै एउटा जहाज बनाउन भन्नुभयो। आउनै लागेको विश्वव्यापी जलप्रलयबाट बच्न नूह र तिनका परिवार अनि विभिन्न प्रजातिका पशुपक्षीहरू यसभित्र पस्नुपर्ने थियो। नूहले परमेश्वरको आज्ञा माने। जहाज निर्माण गर्न बिताएको ४०/५० वर्षको समयावधिमा तिनी “धार्मिकताका प्रचारक” पनि थिए। (२ पत्रुस २:५, NRV) तिनले आउनै लागेको जलप्रलयबारे मानिसहरूलाई चेतावनी दिए तर तिनीहरूले टेरपुच्छर लगाएनन्‌। नूह र तिनका परिवार पशुपक्षीसँगै जहाजभित्र पस्ने समय आयो। त्यसपछि परमेश्वरले जहाजको ढोका थुनिदिनुभयो। अनि पानी पऱ्यो।
चालीस दिन चालीस रात मुसलधारे पानी पऱ्यो र पृथ्वी जलमग्न भयो। दुष्टहरू नाश भए। पानी घट्दै गयो र महिनौंपछि जहाज एउटा पर्वतमा गएर अडियो। अनि जहाजमा भएकाहरू सुरक्षित तरिकाले बाहिर निस्कन सके। त्यतिन्जेल तिनीहरूले जहाजमा पूरै एक वर्ष बिताइसकेका थिए। धन्यवादस्वरूप नूहले यहोवालाई बलि चढाए। त्यसको जवाफमा परमेश्वरले नूह र तिनका परिवारलाई पृथ्वीमा भएका सबै प्राणीलाई जलप्रलयद्वारा फेरि कहिल्यै नाश नगर्ने आश्वासन दिनुभयो। यस सान्त्वनादायी प्रतिज्ञाको रूपमा यहोवाले एउटा चिह्न दिनुभयो। त्यो चिह्न इन्द्रेनी थियो।
जलप्रलयपछि परमेश्वरले मानिसजातिलाई केही नयाँ आज्ञा पनि दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई जनावरको मासु खाने अनुमति दिनुभयो। तर रगत खान भने निषेध गर्नुभयो। उहाँले नूहका सन्तानलाई पृथ्वीमा फैलँदै जान आज्ञा दिनुभयो तर कोही-कोहीले अटेर गरे। मानिसहरू निम्रोद नाउँ गरेका शासकको नेतृत्वमा एकजुट भए र पछि बेबिलोन भनेर चिनिएको बाबेल सहरमा एउटा ठूलो धरहरा बनाउन थाले। तिनीहरूको मनसाय पृथ्वीमा फैलँदै जान परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु थियो। तर तिनीहरूले बोल्ने एउटै भाषालाई परमेश्वरले खलबल पारिदिनुभयो र तिनीहरूले विभिन्न भाषा बोल्न थाले। यसरी उहाँले ती विद्रोहीहरूको काममा भाँजो हालिदिनुभयो। एक-अर्काको कुरा नबुझेपछि तिनीहरूले काम त्यत्तिकै छोडे र तितरबितर भए।
— उत्पत्ति अध्याय ६ देखि ११; यहूदा १४, १५ मा आधारित।
पृथ्वीमा दुष्टता कसरी फैलियो?
नूहले आफूलाई कसरी विश्वासी साबित गरे?
जलप्रलयपछि परमेश्वरले मानिसजातिलाई कस्तो निषेध आज्ञा दिनुभयो?
आदम र हव्वाका धेरैजसो सन्तानले यहोवाको शासन तिरस्कार गरे। तर केहीले भने गरेनन्‌। यस्तामध्ये पहिलो व्यक्ति तिनीहरूका विश्वासी छोरा हाबिल थिए। त्यसपछिका हनोक र नूह दुवैलाई परमेश्वरसँगै हिंड्ने व्यक्ति भनिएको छ। मतलब, तिनीहरूले यहोवालाई मन पर्ने कुराहरू मात्र गरे। (उत्पत्ति ५:२२; ६:९) बाइबलका थुप्रै विवरणले यसरी नै परमेश्वरलाई आफ्नो शासकको रूपमा स्वीकार्ने पुरुष तथा स्त्रीहरूबारे बताएको छ।